उत्पादन फोटोग्राफी को लागी एक शुरुआती गाइड - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / ब्रान्डिङ, फोटोग्राफी, स्वरोजगार, ट्यूटोरियल / उत्पादन फोटोग्राफी को लागी एक शुरुआती गाइड
पन्नी र Sw्ग स्विच
उत्पादन फोटोग्राफी को लागी एक शुरुआती गाइड
उत्पादन फोटोग्राफी शो को लागी मात्र हैन। एकदम शाब्दिक।
हो, मुख्य उद्देश्य सम्भावित उपभोक्ताहरु लाई तपाइँको उत्पादनहरु देखाउन को लागी हो। तर यो भन्दा धेरै धेरै छ। तब के हुन्छ?
यी ती उत्तरहरु हुन् जसको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौं। थप रूपमा, हामी व्यापक उत्पादन जान्नेछौं फोटो विचार, सुझाव, साधारण गल्तीहरु। सुरु गरौं!
उत्पादन फोटोग्राफी के हो?
यदि तपाइँ यसलाई बेच्न को लागी आवश्यक छ, तपाइँ यसलाई देखाउन को लागी आवश्यक छ।
यो एक उमेर पुरानो परम्परा भएको छ पसलहरु भ्रमण गर्न को लागी, एक अनुकूल वस्तु हेर्न को लागी, र यसलाई किन्नुहोस् यदि हामी आश्वस्त छौं। त्यो "विश्वस्त" कारक मा, त्यहाँ उत्पादन को तुलना मा यो धेरै छ। यो विक्रेता, स्टोर को वातावरण, मूल्य, आदि शामिल छ।
ECommerce को उदयले मानिसहरुलाई डिजिटल रूपमा यस्तो किनमेल गतिविधिहरु मा भाग लिन nudged छ। र यस प्रकार, उत्पादन को व्यापकता फोटोग्राफी। यो सारा संसार लाई देखाउँछ कि एक पसल को उत्पादनहरु कस्तो देखिन्छ, वास्तव मा पसल को यात्रा बिना। यद्यपि यो फोटोग्राफी आला ईकमर्स हुनु भन्दा पहिले नै अस्तित्वमा छ, यो कहिल्यै यति ठूलो उद्योग हो कि यो आज छ।
उत्पादन फोटोग्राफी किन महत्त्वपूर्ण छ?
त्यहाँ अझ धेरै छ फोटोग्राफी आँखाले भेट्ने भन्दा।
उत्पादन फोटोग्राफी के देखाउन को लागी आवश्यक छ र यसैले बेचिएको को सार कब्जा। यो मात्र एक उत्पादन को एक तस्वीर लिन को बारे मा छैन। कसरी एक उत्पादन मानव आँखा को लागी देखिन्छ, कथन के फोटो बनाइरहेको छ, र यो इच्छित उद्देश्य को सेवा गरीरहेको छ - सबै एक पेशेवर उत्पादन मा समेटिएका छन् फोटो.
जो कोही र सबै एक तस्वीर लिन सक्नुहुन्छ, हैन? तपाइँ तपाइँको उत्पादनहरु बेच्न को लागी एक पेशेवर तस्वीर को आवश्यकता छैन। तपाइँ मात्र यो देखाउन आवश्यक छ।
ओह, तर तपाइँ यो देखाउन आवश्यक छ। आउँदैछ फिर्ता अफलाइन किनमेल सादृश्य गर्न को लागी, शोरूमहरु कि नेत्रहीन अधिक सौंदर्य र पेशेवर एक उच्च बिक्री दर छ।
एक आधिकारिक स्मार्टफोन शोरूम मा हिड्ने कल्पना गर्नुहोस् र एक स्थानीय पुनर्विक्रेता स्टोर मा हिड्ने कि उही फोनहरु बेच्ने। किन यो हो कि तपाइँ आधिकारिक शोरूम बाट एक सम्भावित खरीद गर्नुहुनेछ भले ही पुनर्विक्रेता उही मूल्य र वारेन्टी मा उही वस्तु प्रदान गरीरहेको छ?
सौंदर्यशास्त्र, विश्वसनीयता, ब्रान्डि,, भरोसा - यी केहि चीजहरु हुन् कि पेशेवर फोटोग्राफी बढाउँछ।
उत्पादन फोटोग्राफी विचारहरु
अब जब कि हामी बुझ्छौं कि यो सबै को बारे मा छ, केहि उपयोगी छलफल गरौं विचार!
एक दृश्य सिर्जना गर्नुहोस्
तपाइँको उत्पादन फोटो मात्र उत्पादन को शामिल गर्न को लागी छैन। तपाइँ धेरै प्रोप र आइटम को उपयोग गरेर एक सम्पूर्ण दृश्यहरु बनाउन सक्नुहुन्छ।
यी वस्तुहरु जरूरी तपाइँको उत्पादन जस्तै छैन। यदि तपाइँ सुन्तला रंग को स्नीकर्स को तस्वीर कैप्चर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ फोटो पृष्ठभूमि मा वास्तविक सुन्तला राख्न सक्नुहुन्छ एक हल्का मन, जैविक अनुभूति प्रदान गर्न।
एक रचना सिर्जना परम लक्ष्य हो। विभिन्न तत्वहरु एक उपयुक्त रचना र, यस प्रकार, दृश्यहरु बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। वा तपाइँ कुनै पृष्ठभूमि तत्वहरु लाई थोरै संग एक सरल, minimalistic दृश्यहरु बनाउन सक्छ। तपाइँको आफ्नै व्यक्तित्व फस्टाउन को लागी यहाँ कुनै नियमहरु छैनन्!
प्रतिबिम्ब संग सावधान रहनुहोस्
प्रतिबिम्ब फोटोग्राफी को एक महत्वपूर्ण पक्ष हो कि अनदेखी गर्न सकिदैन। यो तोड्न वा एक तस्वीर बनाउन सक्छ।
धेरै मा घटनाहरू, यो प्रतिबिम्ब कम गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ। तपाइँ फोटोशूट भन्दा पहिले तपाइँको प्रकाश सेटअप समायोजन गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याकबोर्ड, विसारक, र अवशोषक तुरुन्तै कठोर छाया लाई नल गर्न सक्नुहुन्छ। रणनीतिक रूप मा उनीहरुको उद्देश्य को सेवा whilst को रूप मा फ्रेमिंग बर्बाद गर्न को लागी राख्नुहोस्।
पोस्ट उत्पादन यो साना र साना प्रतिबिम्बहरु लाई सजीलै हटाएर एक कदम अगाडी लिन सक्छ। संग परामर्श गर्नुहोस् अपतटीय क्लिपिंग पथ उनीहरु यो प्रदान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने बारे। यदि तपाइँ यसलाई आउटसोर्स गर्ने योजना छैन, तपाइँ यसलाई आफैं सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाइँ पहिले पेशेवर फोटो सम्पादन कौशल हुनु पर्छ।
यद्यपि प्रतिबिम्ब रचनात्मक रूपमा एक उत्पादन मा चरित्र बाहिर ल्याउन को लागी उपयोग गर्न सकिन्छ, यो संयमित गरिनु पर्छ। जबसम्म तपाइँसँग अनुभव छैन वा तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ फोटोमा के चाहानुहुन्छ, मात्र पूर्ण रूपले प्रतिबिम्ब बाट बच्न।
तपाइँको फ्रेम फ्रीज गर्नुहोस्!
छिटो शटर क्यामेरा को आगमन देखि, फ्रिज फ्रेम फोटोग्राफी एक प्रचलन घटना भएको छ। समय मा जमेको एक खरगोश हप, एक छिटो जेट तस्वीर मा रोकियो - फ्रेम ठंड को सबै उदाहरण हुन्। यो स्टप मोशन फोटोग्राफी को रूप मा पनि जानिन्छ।
फ्रिज फ्रेम उत्पादन फोटोग्राफी मा एक फरक ठाउँ छ। एउटा लोकप्रिय उदाहरण एक स्प्राइट बोतल एक waterbody मा छोडिएको छ, splatters सिर्जना। धमिलोपन को कुनै पनि रूप बिना यो आन्दोलन कब्जा अनिवार्य रूप देखि फ्रेम लाई पूर्ण रूपले ठोक्नु हो। यस्तो शट ताजगी र आश्चर्य को भावना आह्वान, ब्रान्ड लक्ष्य र व्यक्तित्व instilling।
स्टप मोशन फोटोग्राफी जरूरी ब्रान्डि for को लागी लिनु पर्दैन। तर तपाइँ मात्र उनीहरुलाई गर्न सक्नुहुन्छ किनकि उनीहरु शान्त देखिन्छन्!
फ्लैट ले फोटोग्राफी कोसिस गर्नुहोस्
समतल फोटोग्राफी अद्वितीय उत्पादन छविहरु कैप्चर गर्ने एक छिटो र लागत प्रभावी तरीका हो। लगभग सबै उत्पादन niches यस विधि को माध्यम बाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
पहिलो कुरा हो कि तपाइँ चाहानुहुन्छ एक ठूलो, सपाट सतह हो। यो एक tabletop वा भुइँ हुन सक्छ, जो पनी तपाइँलाई अझ राम्रो छ। उत्पादन संगै यो सपाट सतह मा आफ्नो पृष्ठभूमि, र गोली हान्नुहोस्! तपाइँ अघिल्लो उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ विचार जस्तै दृश्यहरु र रचना यस विधि को सबै भन्दा राम्रो बाहिर ल्याउन।
सधैं याद गर्नुहोस् कि उत्पादनहरु फ्लैट देखा पर्छ अर्थात क्यामेरा कोण सीधा tabletop/भुइँ सामना गर्नुपर्छ। तपाइँ कोण परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो अब फ्लैट देखिदैन। समतल फोटोग्राफी को लक्ष्य एउटै "सपाट" भावना संग धेरै तस्वीरहरु प्रस्तुत गर्न को लागी हो, दृश्य स्थिरता सुनिश्चित गर्दै।
360 डिग्री फोटो
यदि तपाइँ यसलाई एक पायदान मा लिन चाहानुहुन्छ, तपाइँ सबै पक्षहरु बाट तस्वीरहरु लिन को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। केहि ईकामर्स प्लेटफर्महरु एक उत्पादन को 360 डिग्री रोटेशन अनुमति दिन्छ। चाहे यो म्यानुअल रोटेशन वा स्वचालित रोटेशन को लागी हो, 360 डिग्री फोटोहरु तपाइँको स्टोर को छवि बृद्धि हुनेछ।
सबै उत्पादनहरु 360 डिग्री फोटो बाट लाभान्वित हुन सक्दैन। एक गिलास मग प्रत्येक कोण बाट देखाउन को लागी केहि नयाँ हुन सक्दैन। यस प्रकार, बुद्धिमानीपूर्वक सोच्नुहोस् कि कुन उत्पादनहरु को पूर्णतया rotatable तस्वीरहरु लिन को लागी।
विशिष्ट रंग हाइलाइट गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको उत्पादन को रंगहरु लाई हाइलाइट गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ धेरै तरिका मा गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम, तपाइँ जोड दिन को लागी एउटै रंग को प्रोपहरु जोड्न सक्नुहुन्छ। वा, तपाइँ विपरीत गर्न सक्नुहुन्छ र एक विपरीत रंग थप्न सक्नुहुन्छ।
जो पनी तपाइँ छनौट गर्नुहोस्, धेरै धेरै रंगहरु संग तस्वीर लाई नराख्नुहोस्। पूरक रंग एक होईन, होइन, तर पनी विरोधाभासी रंग को एक किस्म को मुख्य उत्पादन को फोकस मार्न सक्छ।
र highlight हाइलाइट गर्न को लागी अर्को तरीका प्रकाश को उपयोग गरेर ती रंगहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्न वा उत्पादन घुमाउन को लागी उनीहरुलाई अधिक देखाउन को लागी हो। निस्सन्देह, पोस्ट उत्पादन क्यालिब्रेट र यी हाइलाइट रंगहरु को पोलिश गर्न को लागी प्रयोग गरीनु पर्छ।
धुवाँ बम सधैं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु को लागी लोकप्रिय भएको छ। के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि उनीहरु उत्पादन फोटोग्राफी संग लोकप्रिय छन्?
तपाइँ या त धुवाँ जनरेटर वा बम संग तपाइँको उत्पादन को लागी नाटकीय प्रभावहरु लाई प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाइँ फ्रिज फ्रेम प्रविधि प्रयोग गर्न को लागी एक "चलिरहेको" धुवाँ संग महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि धुवाँ को रंग तपाइँको उत्पादन सूट।
मानौं तपाइँको उत्पादन एक बक्स हो। एक बक्स खोल्न, बन्द, र पुरा तरिकाले अलग गर्न सकिन्छ। यी सबै विविधताहरु को लागी, तस्वीरहरु लिनुहोस्। कहिले तपाइँको उपभोक्ता कसरी उत्पादन प्रकार्यहरु को रूप मा संदेह मा रहन नदिनुहोस्।
यदि तपाइँको उत्पादन कुनै कार्यात्मक विविधता छ, यो रंग भिन्नता हुन सक्छ। तपाइँको उत्पादन शोकेस मा रंगहरु को सबै समावेश गर्नुहोस्। पछाडि कुनै भिन्नता छोड्नुहोस्, र तपाइँ बिस्तारै उपभोक्ता विश्वसनीयता को माध्यम बाट परिणाम देख्नुहुनेछ।
उत्पादन फोटोग्राफी सुझाव
आशा छ, यो विचार तपाइँ आफ्नो उत्पादन फोटोहरु लाई अगाडी लिने को भावना दिनुभयो। अब, यी सुझावहरु तपाइँ तपाइँको फोटोग्राफी यात्रा मा सम्भावित नुकसान को एक धेरै बाट बचाउनेछ।
सही ठाउँ छान्नुहोस्
स्थान उत्पादन तस्वीरहरु को लागी महत्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ एक स्टुडियो भित्र शूटिंग गर्दै हुनुहुन्छ, यो केहि फरक पर्दैन। तर सबै उत्पादन तस्वीरहरु एक स्टुडियो भित्र हुन्छ। केहि शटहरु राम्रो देखिन्छ जब प्राकृतिक घाँस, बालुवा, र कंक्रीट मा लिईन्छ।
जुनसुकै स्थान तपाइँ रोज्नुहुन्छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो तपाइँको उत्पादन र उद्देश्य अनुरूप छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ स्थायित्व मा जोड दिन एक मैला ढेर मा एक बुट राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो मैलाको ढेर सौन्दर्यको साथसाथै फोहोर हुनु पर्छ। पक्का, तपाइँ यसलाई राम्रो देख्न को लागी परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ केहि चीजहरु छन् जुन तपाइँ नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनुहुन्न, पृष्ठभूमिमा टाढाका बस्तुहरु जस्तै। यसैले, बुद्धिमानीपूर्वक तपाइँको ठाउँ छान्नुहोस्।
त्यहाँ दुई प्रकारका क्यामेराहरु छन् कि सामान्यतया फोटोग्राफी को लागी प्रयोग गरीन्छ। यी क्यामेराहरु को प्रत्येक को लागी, त्यहाँ हुन सक्छ कि फरक सुझावहरु छन् मदत तपाइँको अन्तिम परिणाम।
मोबाइल क्यामेरा सस्तो र सजिलो छ तर सीमाहरु को एक धेरै छ। जे होस्, यो सत्य छैन कि तपाइँ सधैं उत्पादन छविहरु को लागी एक DSLR को आवश्यकता छ। धेरै कम बजेट वा मध्यम बजेट ईकामर्स पसलहरु मोबाइल फोटोग्राफी संग आफ्नो व्यवसाय शुरू। यहाँ केहि चीजहरु तपाइँको मोबाइल फोटोग्राफी एक माथिल्लो किनारा दिन को लागी छन्।
क्लिप मा लेन्स लोकप्रियता मा बढ्दै छन्। यि लेन्सहरु लाई मोबाइल क्यामेरा संग मैक्रो शट र उच्च संकल्प शटहरु लिन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ कि यति उन्नत छैन। तपाइँ पक्कै तपाइँको उत्पादन तस्वीरहरु कैप्चर गर्न को लागी उनीहरुलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै समय मा तपाइँको क्यामेरा लेन्स को सुरक्षा गर्नुहोस्। मोबाइल क्यामेरा सजीलै खरोंच प्राप्त, आफ्नो उपयोगिता degrading। यसमा एक लेन्स प्रोटेक्टर राख्दै सुनिश्चित गर्दछ कि केवल संरक्षक खरोंच हुन्छ र कुनै पनी समय बदल्न सकिन्छ यदि आवश्यक परेमा।
DSLR क्यामेरा पक्कै राम्रो छन्। र तपाइँ यी सुझावहरु लाई उनीहरुलाई अझ राम्रो बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी प्राय समायोजन गर्छौं क्यामेरा सेटिंग्स बिल्कुल एक तस्वीर अनुरूप। के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ यी सेटिंग्स क्यामेरा मा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाइँको सिद्ध क्यामेरा सेटिंग को प्रीसेट बनाउन भविष्य फोटोग्राफी सत्र को लागी समय को एक धेरै बचत हुनेछ। यदि कुनै पनी tweaks आवश्यक छ, तपाइँ सधैं अन्य presets सिर्जना गर्न यी presets tweak बनाउन सक्नुहुन्छ। तर प्रत्येक फोटो सत्र को समयमा स्क्र्याच बाट मापदण्डहरु सम्पादन मात्र तपाइँको समय र धैर्य लाई मार्न जाँदैछ।
प्रकाश सेटअप सुझाव
प्रकाश eCommerce फोटोग्राफी को अनदेखी जटिलताहरु मध्ये एक हो। आखिर, भनाइ जान्छ - बत्तीहरु। क्यामेरा। कारबाही!
अपर्याप्त प्रकाश सधैं एक उदास छवि मा परिणाम हुनेछ। पेशेवर फोटोग्राफरहरु नाटकीय दृश्यहरु बनाउन को लागी अन्धकार को उपयोग गर्न सक्छन्। तर शुरुआती को लागी, हामी सँधै मानक, राम्रो बत्ती छविहरु कब्जा गरेर शुरू गर्न को लागी सिफारिश गर्दछौं।
सामान्य नियम 3-4 रोशनी को उपयोग गर्न को लागी हो। एक प्रमुख प्रकाश उत्पादन मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी, एक ठाउँ भर्न को लागी एक भरण प्रकाश, एक पृष्ठभूमि प्रकाश को लागी प्रकाश को पृष्ठभूमि, र अतिरिक्त प्रकाश को कुनै पनि गाढा क्षेत्रहरु लाई भर्न को लागी।
बाउन्स कार्ड - यति धेरै रोशनी एक सानो स्टुडियो ठाउँ र बजेट को लागी परेशानी हुन सक्छ, यस प्रकार तपाइँ अर्को प्रविधि को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
रोशनी गर्न कार्ड बाउन्स
परावर्तक, अन्यथा बाउन्स कार्ड को रूप मा जानिन्छ, सही प्रकाश को क्षेत्रहरु मा प्रतिबिम्बित गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै प्रकाश स्रोतहरु को उपयोग सबै को लागी व्यावहारिक नहुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, यो पनि एक उडाएको छवि मा परिणाम।
बाउन्स कार्ड कुनै कठोरता वा बिजुली लागत बिना प्रकाश बाहिर फैलाउने काम गर्दछ!
तिपाई को उपयोग गर्दछ
एक राम्रो तिपाई तपाइँ महान तस्वीरहरु दिनेछन्। एक महान तिपाई तपाइँ उत्कृष्ट व्यक्तिहरु दिनेछन्। धेरै उच्च-अन्त तिपाईहरु sturdiness सम्झौता बिना पूर्ण समायोज्यता प्रदान गर्दछ।
समायोज्यता यो अर्थमा मद्दत गर्दछ कि तपाइँको क्यामेरा दृष्टिकोण कुनै पनी कोण बाट तपाइँ लाई मनपर्ने बाट निर्देशित गर्न सकिन्छ। हो, तपाइँ ह्यान्डहेल्ड शूट गर्न सक्नुहुन्छ यी दृष्टिकोण प्राप्त गर्न। तर सूक्ष्म कम्पन तपाइँको हात को कारण सधैं तपाइँको तस्वीर को तीक्ष्णता लाई प्रभावित गर्दछ। साथै, एक तिपाई हुनेछ मदत प्रकाश र फोटो रचना जस्तै अन्य चीजहरु को समायोजन गर्दा ठाउँ मा आफ्नो क्यामेरा कोण राख्नुहोस्।
पृष्ठभूमि बनाम फोटोग्राफी पृष्ठभूमि
Backdrops एक छिटो र सजिलो समाधान हो। राम्रो प्रकाश संग जोडीयो, एक पृष्ठभूमि काम पूरा हुनेछ - यो धेरै ईकामर्स व्यवसायहरु को लागी भएको छ।
तर पृष्ठभूमि को उपयोग एक बिल्कुल नयाँ बल खेल हो। तपाइँ फोटोग्राफी संग एक राम्रो अनुभव को क्रम मा यो पुल को लागी आवश्यक छ। पृष्ठभूमि संग उत्पादन फोटो मौलिकता को भावना कब्जा कि सामान्य उत्पादन फोटोहरु गर्दैनन्। जे होस्, यो पुरा तरिकाले तपाइँको ईकामर्स प्लेटफर्म मा निर्भर गर्दछ। केहि प्लेटफार्महरु मात्र सेतो backdrops अनुमति दिन्छ। त्यसैले शूटिंग गर्नु अघि तपाइँको प्लेटफर्म को विशिष्टताहरु सुनिश्चित गर्नुहोस्।
पोस्ट उत्पादन सेवाहरु
जोसुकै विचार तपाइँ लागू र टिप कि तपाइँ उपयोग, तपाइँको उत्पादन तस्वीर पोस्ट प्रशोधन को आवश्यकता छ। यो बिना, यो मात्र एक महान तस्वीर हो, तर एक पेशेवर एक कहिल्यै हुनेछ।
पोस्ट उत्पादन काम प्रत्येक र आफ्नो तस्वीर को प्रत्येक मिनेट विवरण सिद्ध छ, बाट शुरू स्थान उपचार, रंग सुधार, छाया सुधार, र अधिक। यो चमकाने प्रक्रिया स्थिरता र तपाइँको फोटो मा उत्कृष्टता सुनिश्चित गर्दछ, चाहे यो कसरी गोली हानिएको थियो।
तपाइँ सबै पोस्ट-प्रोसेसिंग काम आफैं गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो घण्टा र घण्टा सम्पादन काम को मतलब हुनेछ। साथै, तपाइँ यो गर्न फोटो सम्पादन सफ्टवेयर को एक फर्म समझ को आवश्यकता छ।
यही कारण हो कि पेशेवर फोटोग्राफरहरु आफ्नो पोस्ट प्रशोधन कार्य आउटसोर्स। यसले उनीहरुको सम्पूर्ण कार्यप्रवाह लाई अधिक कुशल बनाउँछ किनकि उनीहरु अधिक छविहरु को शूटिंग मा अधिक समय लगानी गर्न सक्छन्। आउटसोर्सिंग उत्पादन फोटो सम्पादन एक गर्नु पर्छ।
उत्पादन फोटोग्राफी मा सामान्य गल्तीहरु
यहाँ केहि गल्तीहरु छन् कि हामी मध्ये धेरै यस आला मा प्रतिबद्ध छौं।
ज्ञान को सीमा
सुरु गर्नु भन्दा पहिले, हामी के गरीरहेछौं भनेर हामी बिल्कुल बेखबर हुनुहुन्न। हो, यो सत्य हो कि सिक्ने को सबै भन्दा राम्रो रूप गरेर गरेर हो। तर केहि आधारभूत ज्ञान हुनेछ मदत तिमी धेरै टाढा छौ।
यही कारण हो कि हामीले यो लेख तपाइँको लागी बनायौं। आशा छ, यसले तपाइँलाई मद्दत गरेको छ। र जसरी तपाइँ पढ्नुहुन्छ, यो हुनेछ मदत तिमी धेरै!
यो रचनात्मक हुन राम्रो छ, तर त्यो विचलित रचनाहरु बनाउन नदिनुहोस्। एक कार हुड मा आँखा लगाउने को फोटो लिने कुनै अर्थ छैन, यस प्रकार एक अर्काको विरोधाभास हुन सक्छ। यसको सट्टा, एक टेबलटप जस्तै एक पूरक पृष्ठभूमि संग आफ्नो आँखा लगाउने उत्पादन जोडा।
कहिलेकाहीँ दर्शकहरुलाई उत्तेजित गर्नु राम्रो हुन्छ। तर उत्पादन फोटोग्राफी को लागी, यो सबै भन्दा राम्रो छ जब सम्म यो तपाइँको मार्केटि campaign अभियान को एक विशिष्ट लक्ष्य हो विचलित विषयहरु सिर्जना नगर्नुहोस्।
गलत क्यामेरा सेटिंग्स
क्यामेरा सेटिंग्स को लागी केहि लिन को लागी दिइएको छैन। एपर्चर, आईएसओ, शटर गति सबै महत्वपूर्ण क्यामेरा मापदण्डहरु छन् कि सीधा एक फोटो लाई प्रभावित गर्दछ।
शुरुआती अभ्यास गरेर सिक्न सक्छन्, तर अभ्यास मा मात्र भरोसा गल्ती हो। तपाइँ सधैं फोटोग्राफी मा क्र्यास कोर्स लिन सक्नुहुन्छ के बुझ्न को लागी फरक क्यामेरा सेटिंग्स र यस प्रकार तपाइँको अभ्यास फोटोग्राफी सत्र लाई अधिक सार्थक बनाउन को लागी।
कहिलेकाहीँ प्रतिबिम्ब कम गर्न सकिदैन कुनै कुरा के तपाइँ के गर्नुहुन्छ। यो ठीक छ यदि त्यो हुन्छ, तर उनीहरुलाई नछोड्नुहोस्! सधैं पोस्ट उत्पादन को माध्यम बाट प्रतिबिम्ब हटाउनुहोस्। सधैं। जब सम्म, पक्कै, प्रतिबिम्ब युक्त छवि राम्रो देखिन्छ (जो अत्यधिक संभावना छैन!)।
यदि तपाइँ फोटोग्राफी वा एक eCommerce व्यापार को लागी योजना बनाइरहनुभएको छ, तपाइँ बचत गर्न सक्नुहुन्न। तपाइँ प्रत्येक पैसा तपाइँ तपाइँको पूर्वाधार निर्माण मा लगानी गर्नु पर्छ। तर यो सधैं राम्रो बजेट राख्न सम्भव छैन। सुरुमा, एक पेशेवर प्रकाश किन्नु आफ्नो जेब मा एक प्वाल जलाउन लाग्छ। तर राम्रो लेन्स बिना, तपाइँ राम्रो छविहरु शूट गर्न सक्नुहुन्न। तिमी के गर्छौ?
लगानीकर्ता खोज्नुहोस्। उनीहरु तपाइँको साथीहरु, परिवारहरु, सहकर्मीहरु हुन सक्छन् - जो कोहि! तपाइँ सबै गर्न को लागी तपाइँको व्यापार योजना र बिक्री पिच बनाउन को लागी छ, र पक्कै, तपाइँको मा विश्वास गर्नुहोस् विचार। चाँडै वा पछि, तपाइँ कसैलाई इच्छुक पाउनुहुनेछ मदत आफ्नो बजेट बढाउनुहोस्।
FAQ: उत्पादन फोटोग्राफी प्रश्न
कस्तो प्रकारको लेन्स उत्पादन फोटोग्राफी को लागी उत्तम छ?
मानक लेन्स, म्याक्रो लेन्स, र प्राइम लेन्स उत्पादन फोटो को लागी सबै भन्दा उपयुक्त छन्।
Ecommerce मा उत्पादन छवि सम्पादन कती महत्त्वपूर्ण छ?
छवि सम्पादन बिना, दर्शकहरु बस स्क्रॉल हुनेछ उत्पादन तस्वीर पेशेवर देखिने छैन।
उत्पादन फोटोग्राफी को लागत कति हुन्छ?
यो उत्पादनहरु र घण्टा को संख्या मा निर्भर दर फरक फरक छ। यो सामान्यतया $ 30 प्रति घण्टा वा $ 70 प्रति उत्पादन बाट शुरू हुन्छ। अधिक वा कम, कोण र विविधताहरु को संख्या मा निर्भर गर्दछ तपाइँ तपाइँको उत्पादन छविहरु मा चाहानुहुन्छ।
शुरुआती फोटोग्राफरहरु प्रति घन्टा कति चार्ज गर्छन्?
शुरुवात फोटोग्राफरहरु सामान्यतया प्रति घण्टा $ २० चार्ज, तर यो स्थान बाट स्थान फरक हुन्छ।
अन्तिम जूरीको फैसला
ओफ! त्यो एक धेरै मा लिन को लागी थियो, तर एक पटक तपाइँ गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँ के बाहिर दिनुहुन्छ छक्क पर्नुहुनेछ। उत्पादन फोटोग्राफी कुनै मतलब द्वारा मात्र हो, तर यो अभ्यास संग सरल हुन्छ। तपाइँको ईकामर्स यात्रा को सबै भन्दा राम्रो बनाउन को लागी यो संसाधन को उपयोग गर्नुहोस्!
ईकामर्स र फोटोग्राफी विशेषज्ञ Ashique रहमान एक समर्पित शोधकर्ता र लेखक हो। उहाँ ई-कमर्स ब्यापार, ई-बिजनेस अपडेट, टिप्स, र रणनीतिहरु मा लेख लेख प्रकाशित गरीरहनुभएको छ, ट्रेन्डी ब्यापार रणनीतिहरु लाई आफ्नो पेज रैंक, यातायात, रूपान्तरण दर, र एसईओ गतिविधिहरु लाई सुधार गर्न को लागी समायोजित गर्न को लागी। उहाँलाई पछ्याउनुहोस्: फेसबुक,twitter, LinkedIn .
Visiting डिजिटल भिजिटिंग कार्ड बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग
UX लेखन: लेखन र उत्पादनहरु को बारे मा पाठ डिजाइन को लागी नियम
सामेल हुनुहोस् peppermint समाचार पत्र ...
7 महत्वपूर्ण UX कौशल र तिनीहरूलाई कसरी विकास गर्ने
सिरियो रङ (Fedrigoni) – उत्तम रंगीन कागज प्रणाली?
मुद्रण डिजाइनर को 10 सुनौलो नियम
१) तपाईंको प्रोजेक्ट वर्णन गर्नुहोस्
२) नमूना कलाकृति वा प्रेरणा छविहरू?
पन्नी र विशेषता प्रभाव संघ
कालो जादू डिजाइन
डिजाइन सुझावहरु र विशेष छुट को लागी सदस्यता लिनुहोस्